सरकारबाट जाँदाजाँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र खुसी पार्न केपी ओलीले के गरे ? — SuchanaKendra.Com
सरकारबाट जाँदाजाँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र खुसी पार्न केपी ओलीले के गरे ?
करिब एक अर्ब २० करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणारज्यलक्ष्मी शाहलाई थप एक वर्ष निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले एक वर्षका लागि उनलाई घरजग्गा प्रयोग गर्न निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णय भएको एक साता नबित्दै ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । गत २४ असारमा बसेको नेपाल ट्रस्टको बैठकले उनलाई एक वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘७ असारदेखि लागू हुने गरी सो घरजग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ’, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले भने, ‘यसपटक अन्तिमपटकका लागि भनेर म्याद थप भएको छ ।’
सबै कानूनी लडाईं सकिएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर उनले सम्पत्ति छाड्न मानेकी छैनन् । हालसम्म प्रेरणाका लागि तीनपटक गरेर तीन वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको छ ।
गत ७ पुसमा पनि अन्तिमपटकका लागि भनेर ६ महिना म्याद थप भएको थियो । जसअनुसार ६ असारभित्र उनले घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो । ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल ट्रस्टको हुने फैसला चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म सो सम्पत्ति ट्रस्टले आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन । लकडाउनका कारण नयाँ घर बनाउन नसकेको, आफ्नो परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको कारण देखाउँदै प्रेरणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप समय दिन पत्र लेखेकी थिइन् ।
सोही पत्रका आधारमा ओलीले म्याद थप गर्न लिखित रुपमै निर्देशन दिएका थिए । गत २४ असारमा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट